Azonao atao ve ny manome toro-hevitra tsara momba ny lisitra Amazon mba hitantana ny vatan-tenako?
Ny fanomezana ny vokatra ampy ho an'ny mpanjifa mety ho anao dia mbola zava-dehibe kokoa ho an'ny raharaham-barotra mahomby izay azonao eritreretina. Ny tena mahavariana - raha ny marina, mety tsy ho tezitra loatra ianao amin'ny famokarana ny sarin'ny vokatrao miaraka amin'ny "amidy" marika. Midika izany fa tsy tokony ho ny mpanjifanao miandry ny famerenana amin'ny laoniny - ny mpividy rehetra dia tokony hanompo haingana araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny kitaponao. Ity no fotoana handraisanao ny fitaovana mahazatra Amazon amin'ny lisitra - ary ny tombontsoa amin'ny fitantanana ny fitantanana ny fananana ara-dalàna raha toa ka lasa mahasoa kokoa ny fivarotan-tseraseranao an-tserasera. Ny fitaovana finday alemana tsirairay sokajina etsy ambany dia natao manokana ho an'ity tsena lehibe indrindra eto an-tsena ity - ary izaho manokana dia nizaha azy rehetra, fotsiny noho ny fahafenoana. Noho izany, tandremo ny famakiana sy ny fahafahanao misafidy ny vahaolana tsara indrindra fitantanana ny fitantanam-bola izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao sy ny tanjonao.
Ny voalohany ary angamba ny fitaovana mora indrindra amin'ny lisitry ny Amazon, Sellics dia tonga amin'ny endriny tsara tarehy tsara tarehy ary tena mora ampiasaina, na dia ho an'ny mpivarotra vaovao. Anisan'ireo lafiny matanjaka ao amin'ity rindrambaiko ity, misy ny fanaraha-maso mahomby amin'ny fotoana azo ampiasaina amin'ny Profit Dashboard, fanatsarana fanentanana mora sy ny vidin'ny varotra amin'ny alàlan'ny PPC Manager. Azonao ampiasaina koa ny Sellics mba handinihana sy hanatsarana ny lisitry ny vokatra miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fikarohana feno ho an'ny fanalahidin'ny teny filamatra, ny fanadihadiana amin'ny fifaninanana, ary ny famerenana ny vokatra.
Ny fitaovana tsara tarehy Amazon manaraka izay tiako hivoaka dia ny Stitch Labs. Ity sehatra iray tokotokony ity dia miompana amin'ny raharaham-pihariana maro samihafa, mampitombo ny tombom-barotra amin'ny alàlan'ny famolavolana, fanamafisana ary ny fampivoarana. Raha atao tsotra izao, ity rindrambaiko ity dia afaka manome ny mpivarotra ao Amazon amin'ny alàlan'ny tatitra amin'ny antsipiriany, ilaina amin'ny fitomboan'ny fitomboana ary mitaky tombombarotra. Izany dia mamela fotsiny ny mpivarotra handray fanapahan-kevitra tsaratsara kokoa hanatsarana ny fitokisan'ny mpanjifa amin'ny fotoana iray. Anisan'ireo tombontsoa hafa manan-danja miaraka amin'ity fitaovana finday amazonin'ny Amazon ity, dia hitako ny lanjan'ny fifaninanana ho an'ny aterineto kokoa, ny fanaraha-maso matanjaka kokoa, ny fisainana mazava, ary ny fandrindrana manerantany.
Ity fitaovana fandaminana hendry ity dia vahaolana tsara indrindra hanarahamaso ny marika efa antenaina, hamoronana lisitra vokarina mafonja, ary koa Manohana ireo fanoloran-kevitra mahasoa azo tsapain-tànana sy ireo fampandrenesana mialoha izay mampiseho ireo soso-kevitra sy hetsika mety azo raisina amin'ny fikojakojana ny fananan-tany (ohatra, rehefa hanavao ny vokatra sy ny isa ilaina).
Ecomdash no fitaovana farany amin'ny lisitry ny Amazon izay tiako haseho anao anio. Ary raha mivarotra amin'ny sehatra maromaro ianao, ity rindrambaiko fitantanana tahirin-tsolika ity dia ho safidinao amin'ny famonoanao any. Ecomdash dia miasa tsotra fotsiny - azo ampiasaina hanambatra ny vatan-tenanao sy ny lisitra. Midika izany fa afaka mampiaraka mora foana ny angon-drakitra ilaina avy amin'ireo fitaovam-pivoarana rehetra ianao - toy ny fepetra fitakiana, ny baikon'ny fivarotana, sy ny sisa - mba ahafahan'izy ireo mametraka azy ireo amin'ny fomba mahomby sy mora. Miaraka amin'ny famandrihana angona azo amin'ny fotoana iray, afaka manome vahaolana maimaika ho an'ny orinasanao ianao, ary manomboka mivarotra vokatra hafa amin'ny alalan'ny fantsona maro - tsotra sy mamaivay Source .